Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. स्वास्थ्य/जीवनशैली – Janata Live
मौसमी रुघाखोकी ज्वरोले विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरु बिरामी हुने गर्दछन्। यो रोगको प्रकोप नेपालका विभिन्न भूभागमा समय समयमा देखिने गरेको छ। वर्षा यामको शुरु तथा अन्त्य, जाडो यामको शुरु तथा अन्त्यमा साधारणतया रुघाखोकी ज्वरो, इन्फ्लुएञ्जाका विरामी वढी देखिने गर्दछन्। लक्षण –ज्वरो आउने (१००.४ डीग्री फरेनहाइट भन्दा वढी) –टाउको दुख्ने –घाँटी दुख्ने –रुघाखोकी लाग्ने –श्वास फेर्न गाह्रो हुने –बच्चाहरुलाई झाडा पखाला समेत हुन सक्छ बच्ने उपाय –खोक्दा हाच्छिउँ गर्दा सफा कपडा वा रुमाल वा पाखुराले नाक, मुख छोप्ने गरौं। –साबुन पानीले मिची मिची हात धुने गरौं। –पोषिलो र झोल पदार्थ प्रशस्त मात्रामा पिउने गरौं। –ज्वरो आएको व्यक्तिले नगुम्सिएको, हावा ओहोर दोहोर...
गर्भवती महिलालाई कोरोना सङ्क्रमण भए पनि पेटको नानी (भ्रूण)मा सङ्क्रमण सर्ने जोखिम न्यून हुन्छ । यद्यपि, प्रसूतिपछि भने सङ्क्रमित आमाबाट बच्चामा भाइरस सर्ने जोखिम रहने हुनाले सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्रीरोग अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कृतिपाल सुवेदीका अनुसार, सामान्य अवस्थामा भन्दा पनि गर्भवती हुँदा कोरोना जोखिम बढी हुन्छ । तर, गर्भवती महिलामा सङ्क्रमण भइहाले पनि पेटको नानीमा सङ्क्रमण हुन्छ नै भन्ने हुँदैन । गर्भवती अवस्थामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने (रोगसँग लड्ने क्षमता) हँुदा सरसफाइलगायत स्वास्थ्य सुरक्षाका सन्दर्भमा बढी सतर्कता अपनाउनुपर्छ । गर्भवती अवस्थामा यसै पनि विभिन्न स्वास्थ्य समस्या आउने भएकाले स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने उनी...
यदि स्तनपान गराइरहेकी आमामा कोभिड-१९ संक्रमण भएको शंका लागेको छ वा पुष्टि भएको छ भने जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर स्तनपानलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ। - शिशुको सम्पर्कमा आउनु अगाडि हरेक पटक आमाले साबुनपानीले कम्तीमा २० सेकेन्ड मिचिमिची हात धुने वा अल्कोहलयुक्त स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने। - आमाले स्तनपान गराउँदा वा शिशुको सम्पर्कमा आउँदा मास्क लगाउने - आमाले खोक्दा वा हाच्छ्युँ गर्दा कपडा वा टिस्यु पेपरले नाक, मुख छोप्ने र तुरुन्त साबुनपानीले हात धुने र त्यसपश्चात स्तन धोएर मात्र शिशुलाई स्तनपान गराउने - यदि स्तनपान गराइरहेकी आमाको अवस्था गम्भीर छ भने शिशुसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट टाढा रहने र शिशुलाई स्तनपान नगराउने तर दूध निचोरेर सफा...
हाम्रो समाजमा यौनको विषयमा कुराकानी गर्न वर्जित छ । अझै महिलाहरुले यौनको बारेमा खुल्ला भएर कुराकानी गरे भने त उनीहरुलाई अनेक लान्छना लगाइन्छ । त्यसैले पनि महिलाहरु यौन वा सेक्सको बारेमा त्यति खुल्दैनन् । यौनको बारेमा सबैलाई चासो भएपनि सबैले यसलाई दबाएर राख्छन् । यस्तोमा तपाईं आफ्नो पार्टनरसँग बेडमा एक गरमागरम समय बिताउँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो पार्टनरलाई बेडमा के कुराले अझै बढी आनन्द दिन्छ भन्ने कुरा थाहा भएमा तपाईले आफ्नो यौन जीवनलाई अझै रोमाञ्चक बनाउन सक्नुहुन्छ । यौनको विषयमा सबैको फरकफरक रुची र चाहना हुन सक्छ तर, यस विषयमा हाम्रो समाजमा पति पत्नी वा यौनसाथीहरु एक आपसमा खुलेर कुरा गर्न...
एजेन्सी – हाम्रो समाजमा अझैपनि सेक्सका बारेमा खुलेर कुरा गर्न सकिदैन् । तर, सत्य के हो भने नियमित सेक्स स्वस्थ स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण पाटो हो । सेक्सले ब्लड प्रेसर कम गर्छ र कोलस्ट्रोलमा पनि सुधार हुन्छ । सर्वेक्षणका अनुसार नियमित सेक्सले हर्टअट्याक अर्थात हृदयघात र स्ट्रोकको सम्भावनालाई ५० प्रतिशतले कम गर्छ । जो मानिस नियमित सेक्स गर्छन उनीहरु कम विरामी हुन्छन् । सर्वेक्षणका अनुसार नियमित सेक्स गर्दा मानिस शारीरिक रुपमा मात्रै नभई मानसिक रुपमा पनि स्वस्थ रहने उल्लेख छ । सेक्सले इम्यून सिस्टम बढाउँछ: शोधकर्ताका अनुसार सेक्स गर्नुभन्दा केही समय पहिला व्यायाम गरेमा तपाईको स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर पर्छ यसका साथै...
एजेन्सी – गर्भधारणको चाहाना भएका तर बच्चा नभएर तनावमा परेकाहरुका लागि खुसीको खवर छ । हालै गरिएको एक अध्यनले महिलाको मुड अनुसार उनीहरुको प्रजनन क्षमता हुने देखाएको छ । डेली मेलमा प्रकाशित शोधका अनुसार महिलाको मुड र उनीहरुको प्रजनन क्षमताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । शोधकर्ताहरुले महिलाहरुको मुड अनुसार नै उनीहरु गर्भवती हुने कि नहुने भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ । महिलाको मुड पनि शरीरमा हुने हर्मोनको परिवर्तनसँग सम्बन्धित हुन्छ । पुरुषलाई भने यसको फाइदा भन्दा बढी नोकशान हुने शोधकर्ताको भनाइ छ । महिनाबारीको चक्रमा ओभ्युलेसन भनिने अवधिमा महिलाहरु सबै भन्दा रोमान्टिक हुने अध्यनको निष्कर्ष छ । यो समयमा महिलाहरुको सेक्स हर्मोन...
एजेन्सी – सेक्स गर्ने निश्चित समय छैन । उपयुक्त समय र परिस्थिति अनुसार सेक्स गर्न सकिन्छ । अधिकांशले रातिमा सेक्स गर्छन् । तर, रातिमा भन्दा विहानको समयमा सेक्स गर्दा बढि राम्रो हुन्छ । एकाविहानै सेक्स गरे दिनभरी ‘मुड फ्रेस’ हुन्छ । अरु यस्ता कारण पनि छन्, जसले तपाईंलाई विहानकै समयमा सेक्स गर्न उत्साह पैदा गर्न सक्छ । एउटा मात्र होइन, धेरै किसिमका सोध र अनुसन्धानबाट तपाईंलाई स्वस्थ राख्न विहानको समय नै सेक्सको लागि उपयुक्त रहेको पत्ता लागेको छ । सबैभन्दा उत्तम समय भनेको विहान साढे ७ बजे हो । स्टमडीको अध्ययन अनुसार यो समयमा शरिरमा सेक्स हार्मोन्सको मात्रा बढि उत्पन्न...
तपाईँलाई आफ्नो शारीरिक सम्बन्ध राम्रो नभएको जस्तो लागेको छ भने या तपाईँको पाटनरलाई सन्तुष्टि दिन तपाईँ असफल हुनु भएको छ भने यसमा तपाईँको अल्प ज्ञानले पनि काम गरेको हुन सक्छ । सम्बन्धमा सुमधुरताको कमीले तपाईँको सम्बन्ध बिग्रिरहेको त छैन ? यस्तो हो भने एउटा सानो प्रयासले तपाइको सम्बन्धलाई नयाँ स्तरमा विकास गर्न सक्छ । एक अध्ययनका अनुसार अक्सर मानिसहरू ९ बजे देखी रातीभर कुनै पनि समयमा सम्बन्ध राख्ने गर्दछन् । तर, मानिसलाई कुन समय र वातावरणमा यौन इच्छा तीव्र हुन्छ भन्ने कुराले पनि धेरै असर गरिरहेको हुन सक्दछ । अध्ययनका अनुसार महिला र पुरुषको उत्तेजित हुने सम्भावित समय फरक फरक...
हरेक पटक सुरक्षित यौनव्यवहार अपनाउनु पर्छ । महिलालाई विभिन्न प्रकारका यौन सम्बन्धहरू राख्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छन् । कुनै–कुनै महिलाले बलात्कार तथा यौनजन्य समस्या खेप्नुपर्छ । विवाहित महिलामध्ये धेरै महिलाका श्रीमानले अन्य महिलाहरू वा देहव्यापारमा संलग्न महिलाहरूसँग यौनसम्पर्क राखेका हुन सक्छन् । कतिपय महिलाहरू बाध्यताबश वा इच्छाले देहव्यापारमा संलग्न हुन्छन् । यसरी महिलाहरुलाई विभिन्न तरिकाले यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुन बाध्य पारिन्छ र त्यसैकारण यौन रोग लाग्न सक्छ । धेरै महिलाहरू एक जनासँग मात्र यौन सम्पर्क राख्दा यौनरोग लाग्न सक्दैन भन्ने सोचाइ राख्छन् । महिलाले यस्तो सोचाई राख्नु हुँदैन किनभने: कुनै महिलाको एक जना मात्र यौनजोडी भएको तर उसलाई यौन रोग लागेको...